Uluhlu lwemiSebenzi yezeNzululwazi - Umsebenzi Iindawo
Uluhlu lwemiSebenzi yezeNzululwazi
Abathweswe izidanga kwiinkqubo zesidanga sokuqala kwezobunzululwazi banamathuba ohlukeneyo emisebenzi. Ukusuka kwi-anthropologist ukuya kwiinjineli, ngekhe wazi ukuba yeyiphi indlela kwisayensi ye-forensic enokuthatha.
UKUYA i-anthropologist yophando isebenza ngamathambo abantu. Baqokelela ubungqina betolika ubungqina obuchaziweyo bokuchaza unobangela wokufa. Imisebenzi ihlala isebe lezomthetho, njenge-FBI (Federal Bureau of Investigation) kwiLebhu yeLebhu. Amacandelo eLebhu yeLebhu ye-FBI ayancedaii-arhente zogcino-mthethongaphandle kwe-FBI. Ezinye iindlela zomsebenzi zibandakanya iimyuziyam kunye namaziko ophando. Uninzi lwe-anthropologists lubamba ubuncinci isidanga se-Master.
Yintoni i-Forensic Science?
Uluhlu lwemiSebenzi yeBiology
I-Forensic toxicologists isebenza ngokunyanzeliswa komthetho okanye kwi-arhente karhulumente. Nangona kunjalo, mininzi imisebenzi kwiilebhu zophando, kwiinkampani zokuvavanya iziyobisi, nasezibhedlele. Iingcali zetyhefu Chonga iikhompawundi ezahlukeneyo kunye neekhemikhali ezinxulumene nolwaphulo-mthetho, ukufa, okanye isigulana esibhedlele. Uninzi lomsebenzi wenziwa kuseto lwelebhu. Isidanga sebhatshela siyafuneka, nangona kunjalo, uninzi luyaqhubeka ukufumana isidanga senkosi okanye sobugqirha.
Umvavanyi wezonyango (ugqirha wezifo)
Elona khondo liqhelekileyo lomsebenzi we-pathologists yile umvavanyi wezonyango ikwangowona msebenzi uhlawula kakhulu. Ifuna eyona mfundo kunye namava ayo nayiphi na intsimi yenkundla. A umvavanyi wezonyango ibizwa nanini na kukho isifo esingaqondakaliyo. Abanye abaphandi bezonyango baba zii-coroners ( amagosa anyuliweyo okanye amiselweyo ), nangona ingezizo zonke i-coroners ezinazo uqeqesho kwezonyango kwaye zibiza abavavanyi bezonyango ukuba benze izidumbu. Umsebenzi kwiiarhente zikarhulumente zityunjiwe, abanye basebenzela izikolo zonyango okanye izibhedlele. Isidanga esifunekayo sisidanga sonyango (MD).
Izikhundla ezifunwa kakhulu kwezobunjineli yi injineli yophando lwasenkundleni . Inkqubo ye-injineli yophandoUvavanya ukwakheka, iimveliso kunye noomatshini nanini na kukho ukusilela, ulwaphulo-mthetho / ulwaphulo-mthetho okanye ukufa / ukonzakala okunxulumene noko. Iinjineli ze-Forensic zihlala zibizwa ukuba zincedise kuphando lokunyanzeliswa komthetho, ukumangalelwa, kunye nophando. Isidanga sebhatshela kubunjineli bendalo okanye kwinjineli yoomatshini iyafuneka.
Uhlalutyo lweChemistry Scientist
Uhlalutyo lososayensi isebenza nazo zonke iintlobo zolwazi ngokubhekisele kulwakhiwo kunye nokwakhiwa kwemicimbi. Oku kunokubandakanya ukuhlalutya ukutya, amanzi, amayeza, ukunceda ukufumanisa izifo, kunye nokubonelela ngedatha eyahlukeneyo ebalulekileyo kurhwebo nakurhwebo. Iindlela zamakhondo omsebenzi zibandakanya, urhulumente okanye iilebhu zabucala, ezolimo, ezokuvelisa, amalaphu, izinto zokucokisa ioyile, umgubo / iphepha, amashishini eplastikhi / eplastikhi, iinkampani zezixhobo / izixhobo kunye nezinye. Isidanga se-bachelor kwi-chemistry siyafuneka.
UKUYA ugqirha wengqondo Igxile kwimpilo yengqondo enxulumene nomthetho, enjengokulungiswa kwengqondo, imiba yokugcinwa, ukuzibophelela okungafunekiyo, ukuvavanya ubuchule bengqondo bokumangalelwa. Imisebenzi ikwabandakanya uphando olusemthethweni xa kufuneka ukuqonda imiba yamatyala. Iindlela zomsebenzi zibandakanya, izibonelelo zoluleko, iinkqubo zenkundla, ezabucala, iziko lezempilo yengqondo / izibhedlele, izibhedlele zenkundla, ii-arhente zogcino-mthetho kunye nezinye. Ugqirha wezifo zengqondo kufuneka abenezidanga zonyango (MD) kunye neminyaka emine yokuhlala kwengqondo kunye neminyaka emibini yobudlelwane bobuchwephesha kwezengqondo.
Umphandi woPhando lweKhompyuter
UKUYA umphandi wekhompyuter Uphanda kwaye ahlalutye imixholo yekhompyuter kunye nezinye izixhobo zokugcina idatha, ezinje ngeefowuni eziphathwayo, iividiyo zokujonga, iikhamera kunye nothelekiso lweaudiyo. Eminye imisebenzi ibandakanya ukuvavanywa kweenkampani zabucala 'ukhuseleko lwe-cyber. ImiSebenzi ikwabandakanya iNzululwazi yeDijithali / yeMultimedia kunye nohlalutyo lweNkundla. Umsebenzi oqhelekileyo wokhetho ziiarhente zokunyanzeliswa komthetho okanye iifemu zabucala. Isidanga se-bachelor kwi-computer forensics iyafuneka.
Uhlalutyo lweLebhu yoLwaphulo-mthetho
UKUYA Uhlalutyo lwelebhu yolwaphulo-mthetho uvavanya kunye neenkqubo zobungqina obungeniswa ngabaphandi bolwaphulo-mthetho. Uninzi lwabahlalutyi kufuneka badibanise iziqwenga ezahlukeneyo kwindawo yolwaphulo-mthetho ukwenza umfanekiso opheleleyo okanye phantse ogqibeleleyo wento eyenzekileyo. Umhlalutyi ulungisa iingxelo kwaye ngamanye amaxesha uyangqina enkundleni. Imisebenzi ihlala inyanzeliswa ngumthetho. Isidanga se-bachelor kwisayensi yezomthetho siyakhethwa kodwa sinokuba kulwaphulo-mthetho, ulwaphulo-mthetho, okanye isayensi yomzimba.
Iingcali zoMongikazi wezoNyango
Njengeengcali zeeklinikhi, iingcali zoonesi bezobugqwetha ziyalela amakhondo kumagumbi angxamisekileyo esibhedlele, iiyunithi zonyango zonyango lwengqondo, inkqubo yoviwo lokuhlaselwa ngokwesondo okanye basebenze njengelungu leqela lophando lokufa. Eli candelo libandakanya ukuqokelelwa kobungqina, amaxwebhu, ubungqina benkundla, ukhathalelo lwamaxhoba kunye nophando. Umongikazi oyingcali kwezonyango kufuneka abe enesidanga sokuqala ubuhlengikazi. Abanye bayaqhubeka nokufumana ugqirha.
Kukho iindlela ezahlukeneyo zomsebenzi umongikazi wasenkundleni , ezinje ngoochwephesha bezokonga, abaphandi abongikazi, abongikazi abasebenza ngengqondo, iingcali ze-forensic gerontology, abacebisi babongikazi bezomthetho, kunye nabongikazi bezonyango / abaphandi ngokufa.
Ingcali ye-Forensic Ballistics
UKUYA ingcali ye-forensic ballistics ihlala ibizwa ngokuba ngumvavanyi ngompu. Ingcali iya kuvavanya kwaye ihlalutye izinto ezinxulumene nobungqina beebalisensi. Oku kunokubandakanya imipu, iimbumbulu, iziqwenga zeembumbulu, iigobolondo ezimaxhonti, kunye nempahla. Ubungqina buqokelelwa kulwaphulo-mthetho (ukuprintwa kweminwe) kwaye umsebenzi wenziwa kwilebhu yolwaphulo-mthetho kusetyenziswa iinkqubo zekhompyuter kunye nemephu yolwaphulo-mthetho. Iingcali zebhola yezobuchwephesha zisebenza kunye nee-arhente zogcino-mthetho kwaye zihlala zinikela ubungqina enkundleni. Uya kudinga isidanga se-bachelor kwi-forensics.
Imisebenzi emininzi kwiNzululwazi ye-Forensic
Mininzi imisebenzi onokuyifumana kuye nabani na onomdla kwisayensi yezobugcisa. Thatha isigqibo sokuba loluphi ukhetho olukhethekileyo kuwe kwaye ujonge zonke iindlela onokukhetha kuzo kumakhondo omsebenzi.
Kwi-Intanethi Izixhobo Umartinis Eyabantu Izinwele Izitayile Isinxibo Sangaphandle Isixhobo Somdaniso
Iminyaka emitsha yenyani yeembono zepati
imidlalo emnandi yokudlala namantombazana
ubunzima obuphakathi kwenkwenkwana eneminyaka eli-16 ubudala
ungayifumana njani i-obituary yomntu
izinto zokwenza xa ulala ulutsha
isinki engavalwanga nge-baking soda kunye neviniga